Global Voices teny Malagasy » Mandoko fanovana eny an-dalambe ny ‘Art Lords’ ao Afghanistan · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Mey 2019 4:53 GMT 1	 · Mpanoratra Farkhonda Tahery Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Afganistana, Fampandrosoana, Fitantanam-pitondrana, Hevitra, Mediam-bahoaka, Politika, Zavakanto & Kolontsaina
Mangalatra amin'ny vahoaka mahantra eto an-tany ireo orinasan'ny fifandraisandavitra mahamenatra ao #Afghanistan . Tsy miafina amin'Andriamanitra sy ny mason'ny vahoaka ny kolikoly#Iseeyou  #corruption .
Anisan'ny hetsika amin'ny #ReclaimKabul , lalana 50 manerana an'i Kabul no nomena ny anaran'ireo vehivavy Afgàna mahery. Ny tanjon'ity hetsika ity dia ny hanasongadinana fa, tanànan'ny tsirairay i Kabul fa tsy an'ireo manampahefana mpanao kolikoly, ireo mpitarika mpiady ary ny jiolahy. Bodoy i Kabul amin'ny fitsinjovana ny hafa, fitiavana ary hatsaram-panahy.
Tsara tarehy ireo. Fanantenana ho an'ny #Afghanistan ! maroloko! Ary manantena ny hahita ny lokon'ny @ArtLordsWorld  any amin'ireo sekoly #Afghan  rehetra, anisan'izany ny Sekoly Ambony Rabia-e-Balkhi izay nandehanako nandritra ny taona vitsivitsy.
Nankatoavina teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny asan'ny Art Lords ary vao haingana no voatendry tamin'ny Loka 2019 ho an'ny Fahalalaham-pitenenana  tamin'ny sokajy “zava-kanto”, izay resin'ilay Kiorda mpanao politika mpanao hosodoko sy mpanao gazety, Zehra Doğan ny vondrona.
Rehefa manana fo 💜 ny rindrina, dia mahatonga ny olona handihy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/05/31/139267/
 Loka 2019 ho an'ny Fahalalaham-pitenenana: https://www.indexoncensorship.org/2019/01/awards-2019/